What are your expectations from this job? ﻿
What are your expectations from this job?
Tags: the most common interview questions expectations jobs
ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို ဖြေဆိုတဲ့အခါမှာ ကိုယ်အလုပ်လျှောက်စဉ်က ရေးခဲ့တဲ့ မိတ်ဆက်စာ (Cover Letter) မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ သင့်တော်အောင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဖြေရပါ့မယ်။ အဓိက ပေါ်လွင်အောင်ပြောသင့်တာက ကိုယ်က အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့လူ၊ ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့လူ တစ်ယောက်ဖြစ် တယ်ဆိုတာကို သိသာထင်ရှားစေရပါမယ်။
ဒီထက်ပေါ်လွင်အောင် ဆက်ပြီးပြောသင့်တာက အလုပ်ခေါ်စာမှာပါတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မိမိမှာ ရှိတဲ့ အရည်အချင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အသုံးချပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေမှာ ဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် တာဝန်ပြီးမြောက်တဲ့ အရည်အချင်းရှိ ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ရှိကြောင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အဖြေမျိုးကို ပေးသင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ဖြည့်စွက်စေချင်တာက အသေးအဖွဲကိစ္စတွေကို ဖြေလျော့ပေးပြီး လွတ်လတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ သူဖြစ်ကြောင်းကို မသိမသာ ထည့်သွင်းဖြေကြားစေလိုပါတယ်။ ဒါမှ လုပ်ငန်းခွင် စိတ်အနှာက်အယှက်ကင်းစွာနဲ့ ကိုယ်မျှော်လင့်တဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကိုယ်စွမ်း၊ ဥာဏ်စွမ်း ရှိရှိနဲ့ အမှီအခိုကင်းစွာ ထမ်းဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ www.jobless.com.mm
LOTTE MGS Beverage Co.,Ltd
Lotte Group’s mission : “ We enrich people’s lives by providing superior products and services that our customers love and trust.”LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd was incorporated in the ...
Host Link IT Solution
..Wireless Point to Point Connection Satellite Remote Site Installation and Maintenance Network Infrastructure Installation System and Design Implementation Hardware and Network Installation and M...